Gnu / Linux inosvika 6,91% yeDesktop makomputa zvinoenderana neNetMarketShare | Linux Vakapindwa muropa
Vazhinji vashandisi vari kudaidza 2017 gore reGnu / Linux desktop. Iyo gore remahara mashandiro sisitimu anokunda desktop uye desktop makomputa. Kukunda kunoratidzika kunge kwakaringana kupfuura chaiko, asi kunyangwe zvakadaro, kukunda kwaPenguin munzvimbo ino kuri kufambira mberi.
Iyo NetMarketShare kambani yagadzira kuongororwa kwekushandiswa kweiyi inoshanda system, inosvika 6,91% yemakomputa muna 2017. Icho chimiro chinoratidzika kunge chisina kuvimbika asi icho chinoratidza kuti maitiro eiyi sisitimu inoshanda inoramba ichikura mumwedzi ichangopfuura.
ari data yakapihwa neNetMarketShare ivo havana kumbosiyaniswa uye vashandisi vazhinji vanofungidzira kuti 6,91%, nenzira, munhu akakwirira kwazvo uyo Gnu / Linux akakwanisa kuve nawo pakombuta makomputa. Iyi nhamba inogona kunyatso kuve shoma, kuiisa yakatenderedza 6% (kana kunyangwe zvishoma zvishoma) uye kuwira pasi peApple macOS, asi zvakadaro padyo neiyi OS.
NetMarketShare mhedzisiro haina kuvimbika zvakanyanya asi ichiratidza pane zvinoitika zveiyo penguin system
Mhedzisiro yeongororo iyi yakavakirwa pamashandisirwo emakomputa ayo vakawana makumi mana emapeji ewebhu mukati memwedzi waGunyana. Uye zvakare, mune iyi ongororo ChromeOS yakaonekwa seGnu / Linux system, chimwe chinhu icho chevashandisi vazhinji chisingafanirwe kunge chiri icho. Iyi nheyo inogona kupa matambudziko kunyangwe chiri chokwadi zvakare kuti inogona kupa fungidziro yekufunga kwevashandisi makomputa.
Chero zvazviri, chimiro hachina chokwadi asi maitiro acho haasi. Ndokunge, iko kuitika mumwedzi ichangopfuura kunoratidza kuti Gnu / Linux iri kukura pakati pemakomputa epamba uye malaptop, ichiva sarudzo yekutarisa mukuwedzera kune Windows 10. Uye pamwe kana mitambo yemavhidhiyo ichisvika nenzira imwecheteyo neshanduro dzezvirongwa zvakakurumbira, mushandisi inopedzisira yasarudza iyi sisitimu inoshanda uye uzivi hwayo Haufungi here?
Yakazara nzira kuchinyorwa: Linux Vakapindwa muropa » General » Noticias » Gnu / Linux inosvika 6,91% yeDesktop makomputa zvinoenderana neNetMarketShare
Haisi iyo 4.83%?
Ini handioni iyo 6,91 chero.
Yakatungamira zvakanaka chinyorwa. Zvinhu padivi pechimiro icho hazvitendwe nechero ani, izvo zvaizoreva kuti kune vangori pasi pezana nemamirioni zana vevashandisi veGNU / Linux! hmmm tinoda. Chokwadi chinotaurirwa, ndeye kungotora maficha senge KDE Unganidzo mune yeGoogle Play repositi yemafoni uye kutarisa huwandu hwokudhanilodha uye iri pamusoro pevashandisi zviuru zana. Chimwe chikumbiro chakaita saClementine achinyumwira anonyora zvakaenzana zvekurodha pasi (uye izvo zvinoburitswawo paWindows), kune izvo isu tinofanirwa kuwedzera mazana matanhatu ezviuru kuva akanaka, tichiverenga vashandisi veGnome nevamwe, asi tichitora huwandu hwakaenzana hwevashandisi vanopfuura maviri akaisa migove (iyo inogona kunge yakawanda kwazvo) ... mune yakanakisa kesi isu hatipfuure vashandisi mazana manomwe.
Iri kungopinda http://distrowatch.com/ uye uzive kuti hausvike kune makumi mana evashandisi vanoshanda pasirese nekuwedzera zvese zvakanyoreswa.
@Shalem Dior Juz Ini ndiri mushandisi weLinux, uye gore rino ndakaisa Linux pane anopfuura gumi maPC eshamwari uye mhuri iyo yaive nemahwindo edhisheni repamba uye hapana inoshanda mu distrowatch; kunyange neniwo.
Ini ndinotenda kuti Linux yakura zvisingaenzaniswi nekuda kwemastros akadai se deepin, yekutanga uye Mint iyo yakawana nharaunda dzakapukutwa kwazvo, tichifunga kuti kumushandisi wepamba OS inopinda nemeso, nekuti inoshandisa chete bhurawuza muna 70% * fungidziro yangu kubva ruzivo sehunyanzvi *.
Desktops senge KDE Plasma zvakare anozivikanwa kwazvo nevashandisi.
Ini ndinotora zviyero izvi netariro huru.
Ini ndinogona kutaura kuti chikamu chiri pa5%, izvo zvatove zvakanaka kwazvo, ndine chokwadi chekuti na2020 inenge yatopfuura Mac Os. Kunze kwezvo, ini ndaita yangu diki nekuita mashandiro uye nekupa iyo inoshanda sisitimu online uye chokwadi ndechekuti kugamuchirwa kwakura zvakanyanya.
Vandinoshanda navo, ndinofunga zvakafanana nevakawanda, Linux yakakura zvakanyanya, ini pachangu ndakaisa Linux kune vanoverengeka vatengi uye vanozivana kde Neon, Mint muNotebokk uye Desktop CPUs ,,,. Hatigone kutungamirwa ne distrowatch…. uye 5 kana 6% haina musoro…. Uye icharamba ichikurawo.
Maitiro ekuisa uye kusunungura mapakeji muManjaro Linux